SEO soso-kevitra avy amin'ny Semalt amin'ny fomba hitsidika ny mpitsidika mankany amin'ny tranonkala
Ny varotra e-commerce dia lasa faritry ny raharaham-barotra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao.Any Amerika Avaratra fotsiny, manodidina ny 8% amin'ny fifanakalozam-barotra varotra antserasera dia atao anaty aterineto miaraka amin'ilay sary izay andrasana hamelezina ny isa roa amin'ny an'nyfaran'ny folo taona.
Eo amin'ny sehatry ny varotra e-varotra dia mihamitombo ny fanambyny fitarihana ireo mpanjifa manana tanjona kinendry eo amin'ny sehatrao - patek philippe nautilus watches. Ny valiny dia ny fiantohana anao amin'ny fikarohana rehetra mifandraika amin'izanyvokatra sy serivisy. Izany no nahatonga ny tetik'ady fanatsarana (SEO) mba hanatsorana io laharana io.
Eo ambany sehatra, ny SEO dia miankina amin'ny algorista sy fitsipika henjanatoy ny ao amin'ny webmaster Google. Ireo mpikaroka ao amin'ny tranonkala dia mila manao fikarakarana fandefasana tranokala fohy mba hifanaraka amin'ny algorithmmitaratra ny vaovao farany navoakan'ny Google. Raha manao izany ianao, dia afaka mihazona na manatsara ny fizotry ny milina fikarohana ianao arynoho izany dia mitarika ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao.
Io algorithm complexes io dia ahitana fotodrafitrasa mihoatra ny 200. Ivan Konovalov, mpitantana ny Success Successor Semalt ,(sokajy telo).
1..Tech Website Setup
Ny tranonkala e-commerce lehibe indrindra dia mila interface tsy misy tambiny sy mahasoa,izay mamela ny mpanjifa mety hitambatra amin'ny endri-javatra sy ny votoatiny. Tsy azonao atao ny mampandefitra ny hatsaran'ny drafitra na nykalitao ny votoatiny. Ataovy mora foana amin'ny baoritra ny menus, manorata votoatim-pejy amin'ny fomba mazava tsara amin'ny fampiasana ny fiteny mivarotra sy ny teny kely kokoadia manome ny famaritana ny vokatra sy ny fampiharana ireo teny manan-danja manan-danja amin'ny sehatra iray manontolo. Amin'ny fotoana handehanan'ny mpanjifa iray, dia izy ireotokony hiala amin'ny traikefan'ny mpampiasa indrindra amin'ny fiainany. Izany no manazava ny antony mahatonga ny ankamaroan'ny tranokala e-commerce hampiditra ny fifantohan'ny mpampiasavondrona alohan'ny fanombohana ny tranonkala an-tserasera. Nandritra io dingana io, dia nampiharihary ny tsy fifanarahana izy ireo, nanatsara ny endrika,Ny votoatiny sy ny tranonkala dia manome ny sehatra e-commerce manontolo ho an'ny mpampiasa farany.
2. On-Page Optimization amin'ny SEO
Ny famerimberenana eto dia manondro ireo antsipiriany efa zatra manazava ny momba anao.Eto, tsy maintsy mampiasa teny manan-danja sy marina ianao, izay maneho ny vokatra na ny serivisy atolotra amin'ny tranokala sy ny angon-drakitraoamin'ny famaritana ny valin'ny fikarohana izay mampiseho ny toerana misy anao raha oharina amin'ny mpifaninana. Tokony hankasitraka ny maha-zava-dehibe ny fikarohana ny teny fanalahidy ianaoary ampiasao izany miaraka amin'ny tranobe anatiny sy ivelan'ny rindrina ivelany mba hanomezana ny fahamendrehana sy ny lanjany. Ny tena zava-dehibe, ataovy nytranonkala mifandraika amin'ny solosaina sy ny sehatra finday miaraka amin'ny haingam-pandeha azo ekena sy sary avo lenta.
Ny sehatry ny tranokala e-commerce dia tsy maintsy manana mari-pankasitrahana SSL ihany koa mba ahazoana antoka ny carte de créditvaovao. Io fahazoan-dàlana io dia ahafahanao mandrindra ny karama virtoaly amin'ny fahatokisana, mora amin'ireo mpanjifanao. Farany, ny anaoNy tranokalan'ny tranonkala dia tokony hanana foana ny votoatin'ny SEO vaovao sy ny mombamomba azy mba hahafahany mijery azy amin'ny Google sy ny karoka hafa. Antranonkala tsy mavitrika na manao ahoana na manao ahoana ny hatsaran'ny fitadiavam-bola hikaroka ny tsy fandriam-pahalemana. Ny fikojakojana tsy tapaka dia midika koafa ny tranonkala dia maneho ny antsipiriany marina momba izay omenao ny mpanjifanao. Mijoroa mandrakariva ireo mpampiasa tranonkala amin'ny rafitra fanehoan-kevitramba hahafahanao mampivelatra ny traikefan'ny mpampiasa bebe kokoa.